Iindaba-Ngaba uyayazi imisebenzi ephambili yescreen sesinyithi
Wocingo steel stainless
Umnatha wocingo okhethekileyo
Icebo lokucoca ulwelo wocingo Screen
Epoxy camera umnatha wocingo
Stainless welding wocingo
Ngaba uyayazi imisebenzi ephambili yescreen sescreen
Iscreen sesinyithi sinemisebenzi emine elandelayo:
Uvavanyo: ubukhulu becala isetyenziselwa amasuntswana aqinileyo, umgubo kunye nokuhlolwa kwesinyithi, amalahle, irabha, ipetroli, imboni yamachiza, ikhemesti, imoto, iiseramikhi, iglasi namanye amashishini.
Ukhuselo: ubukhulu becala isetyenziselwa ulwakhiwo loluntu, ibhetshi yesamente, ukukhulisa iinkuku, amadada, amarhanisi, imivundla kunye nezocingo lwezilwanyana. Ukukhuselwa kwezixhobo zoomatshini, ukhuseleko kuhola wendlela, ucingo lwasebaleni, ibhanti eluhlaza yokhuselo lwendlela.
Ukucoca, ikakhulu kusetyenziswa iscreen sodaka kwishishini le-petroleum, ukukhethwa kwesikrini kumzi-mveliso wefayibha ye-electroplating kunye nokucoca igesi kulwelo kunye nokucoca.
Ulungiso: lunokusetyenziselwa ukuqinisa kunye nenkxaso yamathambo kwishishini lokwakha, uhola wendlela kunye nebhulorho.
Ngaba unayo ukuqonda kwemisebenzi emine yescreen sescreen? Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngescreen sesinyithi, nceda undwendwele iwebhusayithi yethu
Sonke siyazi ukuba isikrini sinoluhlu olubanzi lwezicelo, kwaye sinokudlala indima kunyango lwelindle. Ke, yeyiphi indima enokudlalwa siscreen kwinkqubo yogutyulo lwelindle? Emva koko, iXiaobian iya kuyazisa
Indima yesikrini kunyango lwelindle.
Iscreen siyiyunithi yonyango yesityalo sokucocwa kwelindle, esihlala simi phambi konyango ngalunye lwesityalo sonyango (indawo yokumpompa isump, igumbi legrit, itanki yentlenga kunye nokuphela kokungena kwamanzi). Owona msebenzi wabo kukususa izinto ezixineneyo emanzini, ukukhusela izixhobo zoomatshini bonyango (ngakumbi impompo) kunye nokuthintela ukubhloka kombhobho.
Ixesha lokuposa: Aug-24-2021
Ezona ndlela ziphambili zokusebenzisa ucingo lwedashang zinikwe apha ngezantsi
Rotary neentshukumo Screen enemingxuma
Umnxeba:0086 318 7563319
I-Cel:0086 318 7521333
Brass wocingo ingubo